Manamboatra fiarotava i Shina noho ny tinady manerantany nateraky ny COVID-19 · Global Voices teny Malagasy
Manamboatra fiarotava i Shina noho ny tinady manerantany nateraky ny COVID-19
Voadika ny 02 Mey 2020 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, українська, عربي, русский, Ελληνικά, Nederlands, srpski, Aymara, 日本語, English
Zotra famokarana fiarotava. Pika avy amin'ny lahatsarin'ny China Daily tao amin'ny mpisera Twitter China Science.
Zahao ny pejy manokan'ny Global Voices fiantraika manerantanin'ny COVID-19.
Taorian'ny fametrahana paikadim-pitokana-monina izay nahomby hifehezana ny fielezan'ny COVID-19, dia niverina nanohy ny asany ara-toekarena i Shina tamin'ny marsa teo. Koa satria mitombo izaitratra ny filàna sarombavaorona sy ireo vokatra ara-pitsaboana hafa manerana izao tontolo izao, dia nanova ireo zotram-pitaovam-panambatambarana hamaly izany tinady izany ireo orinasa shinoa. Vokatry ny areti-mandringana, mihoatra noho ny fanoitran'ny fitomboana ara-toekarena ny vokatra hitsaboana saingy eo anivon'ny drafitr'i Shina hanatontosana ny “diplaomasian'ny fiarotava” izany.
Miroborobo ny fihariana
Hita teny rehetra teny ny fiarotava sady mora dia mora, fa niova ho ifampitadiavana ao anatin'izao fielezan'ny COVID-19 izao. Talohan'ny fianahan'ny COVID-19, namidy manodidina ny 100,000-200,000 yuan RMB (manodidina ny $14,150 ka hatramin'ny 28,300 dolara amerikana) ny vidin'ny milina manamboatra fiarotava iray. Ankehitriny mihoatra ny avo telo heny ny vidiny. Na izany aza, mahavokatra fiarotava anelanelan'ny 100,000 ka hatramin'ny 160,000 isan'andro ny milina iray izay midika fa vetivety dia azon'ny milina iray ny 100,000 yuan RMB (US$14.150) isan'andro.
Ao amin'ny lahatsoratra WeChat iray malaza mitondra ny lohateny hoe Fiarotava adala/Milina manonta vola: Indray alina monja dia manankarena aho, no nanazavan'ny mpandraharahan'ny e-cigarette teo aloha, Mr. Zhou, ny tombombarotra lehibe azony amin'ity fihariana ity :
Tsy hoe manitatra loatra ny fanaovana fampitahana azy amin'ny milina mpanonta vola raha hamariparitra ity fihariana ity. Na dia misondrotra avo aza ny vidin'ny siraka (fibre) notsofina mitsonika, dia tsy mihoatra ny 60 cents RMB (10 cent USD) amin'ny ankapobeny ny saram-pandanian'ny fiarovata tsotra iray. Raha ny tokony ho izy dia tokotokony ho 30-40 cents RMB ny vidiny ary ny faratampony amin'izany dia 50-60 cents. Ankehitriny ny vidiny amarotana azy any amin'ny mpamongady dia mihoatra ny 2 yuan RMB …
Any amin'ny lahatsoratra iray hafa, mivezivezy ao amin'ny Weibo, mpihary iray avy any Zhejiang no nolazaina fa mihoatra ny RMB 100 tapitrisa yuan (manodidina ny US$14 tapitrisa) ny tombombarotra tratrariny mandritra ny volana marsa.
Na i Etazonia na i Eoropa dia samy manana ny fenitra amin'ny vokatra ara-pitsaboana, ary mila afaka amin'ny fitsapana ara-kalitao ny mpamokatra sady mahazo sertifikà maro mba hahazoana lisansa sy alalana hanondrana any ivelany. Nanombana ny tsena i Martin Cun, mpandraharaha iray, ary nanoritra fa ny tena hery ho an'ny orinasa dia ny mahazo sertifikàn'ny kalitao avy any Etazonia sy Eoropa :
Tahaka ny manonta vola ny mamokatra fiarotava saingy, mila mahazo ny sertifikà avy any Eoropa sy Etazonia ianao mazava loatra raha te-hanao fihariam-panondranana. I Frantsa monja izay manana mponina 67 tapitrisa, no nanao komandy 2 miliara avy aty Shina. Mihoatra ny 1 mimiara anefa ny fitambaran'ny mponina ao Etazonia sy Eoropa…
Simban'ny haratsin'ny fiarotava ny diplaomasian'ny fiarotava
Ankoatra ny tombony azo avy amin'ity fihariana mihamiroborobo ity, Noraisin'i Beijing ny politikan'ny “diplaomasian'ny fiarotava hanamafisana ny fifandraisana amin'ireo firenenkafa tena mila fitaovana ara-pitsaboana mafy dia mafy.
Na izany aza dia mety ho tsy mahomby araka izay nokasaina ity diplaomasia ity noho ny haratsin'ireo vokatra ara-pitsaboana shinoa. Hatramin'izao namerina fiarotava 60 tapitrisa i Holandy ary namerina kits fitiliana COVID-19 haingana miisa 58.000 tsy izy samy novokarina avy ao Shina i Espaina tamin'ny volana marsa.
Tao amin'ny gazetiboky antserasera iray, Atoa Chen, mpandraharahan'ny fanondranana, no namoaka ho fanta-bahoaka fa tsy miasa any amin'ny efitrano tsy misy vovoka — tontolo ilaina hamoahana vokatra ara-pitsaboana — ny 60 isanjaton'ny zotram-panambatambarana fiarotava ao Shina. Navoitrany fa misy ireo orinasa sasantsasany izay manana lisansa fanondranana no mividy fiarotava avy any amin'ny orinasa hafa mba hamenoana ny tinadin'ny tsena .
Nizara lahatsary zotra famokarana fiarotava ny mpisera Twitter @gan_run:
— run gan (@gan_run) March 25, 2020
Ity ilay antsoina hoe milina manonta vola eto Shina. Afa-mandrairay fiarotava ny mpiasa ary tsy ilaozam-bovoka ny efitrano. Ka ireo ve ny fiarotava amidy lafo amintsika?
Raha maro ny firenena no tsy afa-po amin'ny kalitaon'ireo vokatra ara-pitsaboana, mingerongerona ihany koa ny olompirenena fa mora loatra ny ivarotan'ny orinasa azy ireny:
Tsy misy afa-tsy 10,2 miliara yuan RMB ny totalin'ny sanda aondrana, tahaka ny hoe fanomezana ny ankamaroan'ny [vokatra] aondrana.
我们不仅要卖，而且要高价卖给美国！ ！ ！
Tsy maintsy mivarotra ny vokatra isika, mametraka ny vidiny ho ambony dia ambony ho an'i Etazonia!
Nitatitra ny Fadintseranana Shinoa fa tanelanelan'ny 1 marsa ka hatramin'ny 4 avrily, toy izao manaraka izao ny vokatra naondran'ny firenena: 3,86 miliara ny fiaro tava, 37,5 ny kojakojam-piarovana, 2,4 tapitrisa ny thermometatra infra-mena, 16.000 ny vantilatera, 2.84 tapitrisa ny fehim-pitiliana COVID-19, ary 8.41 tapitrisa ny solomasom-piarovana.